Nogadraina Ao Amin’ny Fonjan’i Evin ao Iran i Mostafa Aziz, Iraniana Mpanatontosa Fandaharana Televiziona · Global Voices teny Malagasy
Nogadraina Ao Amin'ny Fonjan'i Evin ao Iran i Mostafa Aziz, Iraniana Mpanatontosa Fandaharana Televiziona
Voadika ny 31 Marsa 2015 19:12 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Nederlands, Català, Español, Ελληνικά, English
Mostafa Azizi, Iraniana mpanatontosa fandaharana fahitalavitra sady mpanoratra nosamborina iray volana taorian'ny fodiany tao Iran rehefa avy nandao an'i Canada. Sary avy amin'i Mahdi Delkhasteh tao amin'ny Wikipedia (Azon'ny rehetra ampiasaina).
Taorian'ny taona maro nipetrahana tao Toronto amin'ny maha-mponin'i Canada azy fotoana maharitra, dia niverina nody tao Iran tamin'ny volana Janoary ilay mpanoratra sady mpamokatra fandaharahana televiziona Mostafa Azizi. Nosamborina izy tamin'ny 1 Febroary ary napetraka tamin'ny efitra mitokana ao amin'ny fonja malaza ratsy ao Evin . Avy eo nafindra tao amin'ny Faritra 2-A fehezin'ny IRGC [Mpiambina Islamika Revolisionera] izy, ary farany nafindra tao amin'ny Faritra 8, Vondrona faha-7 tsy dia abenana be tamin'ny volana Marsa.
Niresaka tamin'ny Global Voices an-telefaonina i Arash Azizi, zanak'i Mostafa fa tsy fanta-bahoaka ny vaovao momba ny fisamborana an-drainy raha tsy tamin'ny 28 Martsa 2015:
Efa elaela aho no nahafantatra ny fisamborana azy, saingy nanapa-kevitra ny fianakaviana tsy hamoahana ny vaovao sy ny hanaovana izany ho raharaha politika. Vao haingana izy ireo no tapa-kevitra fa tokony hampahafantarina amin'izay izany.
Araka ny loharanom-baovao iray tsy fantatra anarana nivoaka tao amin'ny Sampam-baovaon'ny Mpikatroka Ny Zon'olombelona. Voampanga ho “manevateva ny mpitondra faratampony”, “mifanandrina amin'ny mpanorina ny revolisiona Islamika”, “manao fampielezan-kevitra manohitra ny fitondrana”, ary “fiokoana amin'ny fitondrana” sy ny “filaminam-bahoaka” i Azizi.
Alohan'ny nifindrany tany Canada, namokatra fandaharana momba ny fanabeazana sy ny ara-tsiansa tao amin'ny Radiom-pirenena Iraniana i Azizi, mandra-pifindrany tamin'ny fahitalavitra ho talen'ny Sampana Fanentanana an-tsolosaina hoan'ny fampielezam-peom-pirenena, Fampielezam-peo sy sarin'ny Repoblika Islamika ao Iran. Nifindra tao Canada izy tamin'ny 2009, olo-malaza ara-kolontsaina fanta-daza teo amin'ny fiarahamonina Iraniana tao Toronto izy. Nanorina ny Alternate Dream Productions,izy ary nampiantrano ny foibe antsoina hoe Farhang Khaneh (Tranon'ny Kolontsaina) izay lasa foiben'ny hetsika ara-kolotsaina, tahaka ny atrikasa momba ny fanoratana ny fizotry ny tantara foronina (scenario) sy fandefasana sarimihetsika.
Araka ny filazan'ny zanany, nanapa-kevitra hiverina ao Iran i Azizi noho ny toe-draharaha ara-politika milamindamin-dratsy sy ny fanambaran'ny Fitantanan'i Rouhani ankehitriny fa tokony hiverina honina sy hiasa am-pilaminana ao amin'ny firenena nahaterahany ny Iraniana monina any ivelany. Noforonina teo anivon'ny Ministeran'ny Fitsikilovana ny Komity hoan'ny Fiverenan'ny Iraniana mpila ravinahitra, tarihin'i Hassan Qashqavi, minisitry ny raharaham-bahiny lefitra misahana ny raharaha momba ny Masoivoho, Parlemantera, sy ny Iraniana mpila ravinahitra. Tamin'ny fanambarana tamin'ny Novambra 2013, hoy i Qashqavi:
Ny antony mahatonga ireo Iraniana marobe tsy hiverina ao Iran dia noho ny [tahotra] voizin'ireo vondrona mpanohitra Iraniana any ivelany. Raha ny hevitro, maro amin'ireo tahotra ireo no noforonin'ny tena. Tsy misy fototra izany tahotra izany.
Nilaza i Arash Azizi fa nandray ny tenin'ireo manampahefana ireo ny rainy:
Nilaza i Qashqavi fa tokony hiverina hody ireo Iraniaina any ivelany, ary tsy hisy olana ho an'ny 97 isan-jaton'izy ireo. Tsy nanao na inona na inona ara-politika ny raiko, mpanakanto izy. Nifototra tamin'ny fanehoan-kevitra navoakany tao amin'ny Facebook ny “helony” ary noho ny fanarahamaso ataon'ny governemanta amin'ny fanehoan-keviny ao amin'ny media sosialy no nahatonga ny fiampangana azy. Niverina nody mba hiaina ny fiainany araka ny nampanantenain'ny sarin'ny fiovana sy ny fampitoniana izy. Niverina nody izy, nahafoy ny tranony tao Canada, ary tonga tao noho ny antony mahasoa, ary tena faly nihaona tamin'ny rainy marary. Ny iriny hatramin'izao dia ny honina ao Iran. Tianay izy mba handany ny fotoanany – tsy amin'ny sazy lavabe – ary hanohy hiaina eto, ao amin'ny fireneny.
Fantatra amin'ny fanarahamaso ataony amin'ny vontoaty ara-politika saropady ao amin'ny haino aman-jery sosialy i Iran izay heverina fa nanangonan'ny polisy ireo porofo fanamelohana an'i Azizi. Vao haingana ny IRGG [Mpiambina Revolisionera] no nanambara fametrahana hetsika vaovao fanarahamaso antsoina hoe “Ankaboot” (Hala) izay natao hanaraha-maso ireo pejy Facebook ho manao “kolikoly” sy ny fomba fiainana nalaina avy amin'ny Tandrefana. Nanana anjara toerana lehibe tamin'ireo fisamborana marobe vao haingana ity hetsika ity, na dia izany aza, efa mahazatra ny asan'ny polisy tahaka izany talohan'ny namoahana ny “Ankaboot”. Tamin'ny volana Jolay 2014, mpisera Facebook valo no nahazo sazy mitotaly 127 taona an-tranomaizina noho ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook, izay nolazain'ny manam-pahefana fa “fihetsika manohitra ny fiarovam-pirenena, mampiely fampielezan-kevitra manohitra ny fitondrana, naniratsira ny masina sy nanevateva ny filohan'ny Repoblika Islamika “. Nanakatona ireo kaontiny amin'ny media sosialy sy ny habakany i Azizi nanomboka teo. Nilaza taminay ny zanany fa nanangana antonta-taratasy misy ireo lahatsoratra nosoratan'i Azizi tamin'izy mbola mavitrika ny governemanta.
Amir Rashidi, Iraniana mpikaroka momba ny fiarovana niresaka tamin'ny Global Voices:
Tsy misy amin'ireo fisamborana ireo no misy ifandraisany amin'ny hosoka ara-teknika amin'ny solosaina, fa mifototra amin'ny vaovao ifampizaran'ireo mpiserasera. Tenimiafina mora fantarina na tenimiafina nomen'ireo gadra … Ny tanjona lehibe an'izao fanagadrana sy fandrahonana izao dia ny hampiteraka tahotra.
Malaza eo anivon'ny fiarahamonina Iraniana ao Toronto i Azizi. Anoosh Salahshoor, Iraniana-Kanadiana mpianatra lalàna sy mpikambana ao amin'ny foibe ara-kolontsaina iray ao Toronto nahitana ny fahavitrihan'i Azizi, nilaza momba ilay lehilahy hoe;
Lehilahy tena mavitrika, manana fitiavana goavana amin'ny fanaovana izay handrenesana ny feon'ireo olona niangaran'ny vintana. Tena nifandray tsara tamin'ny tanora ihany koa izy